အာဖဂန်မှာ ကုန်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်လာ ၂ ထရီလီယံအတွက် အမေရိကန် ဘာပြန်ရခဲ့လဲ? | CNA-Asia
အာဖဂန်မှာ ကုန်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်လာ ၂ ထရီလီယံအတွက် အမေရိကန် ဘာပြန်ရခဲ့လဲ?
December 12, 2019 By admin International News
အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ အမေရိကန်က ၁၈ နှစ်ကြာ ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့စစ်အတွက် ဒေါ်လာ ၂ ထရီလီယံ(၁ ထရီလီယံ= သန်းပေါင်း ၁ သန်း)ကျော် ကုန်ကျခဲ့တယ်လို့ အားလုံးကပြောကြတယ်၊ ဒီငွေတွေကုန်ကျခဲ့တာ အကျိုးရှိပါရဲ့လား။
ပြစရာကတော့ နည်းနည်းပဲရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာ တာလီဘန်တွေက နိုင်ငံဧရိယာအတော်များများကို ထိန်းချုပ်ထားတယ်၊ အာဖဂန်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒုက္ခသည်နဲ့ရွှေ့ပြောင်းတွေအများဆုံးထွက်တဲ့ ပင်ရင်းနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် ကျန်ရှိနေဆဲ။ စစ်ပွဲအတွက် ပေးဆပ်ခဲ့ရတာတော့ အမေရိကန်စစ်သား ၂၄၀၀ ကျော်နဲ့ အာဖဂန်အရပ်သား ၃၈၀၀၀ ကျော်ရဲ့အသက်တွေ။
မျက်မှောက်ခေတ် ရှင်သန်မှုဘဝတစ်ချို့ တိုးတက်လာတော့ရှိတယ်၊ အဓိကအားဖြင့် မြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာ ပညာသင်ဖို့အခွင့်အလမ်း တိုးတက်လာ၊ ကျောင်းတွေမှာ မိန်းကလေးတွေ ပိုများလာတယ်။ အကောင်းဆုံးရယ်လို့ မတည်ငြိမ်ပေမယ့်လည်း ဒီမိုကရက်တစ် အဖွဲ့အစည်းတွေလည်း တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်။
ဘရောင်းတက္ကသိုလ်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အရ အမေရိကန်တွေ အာဖဂန်အတွက် ကုန်ကျခဲ့တာ ဘယ်ကဏ္ဍမှာ ဘယ်လောက်ဆိုတာ အောက်ပါအတိုင်း-
စစ်ပွဲဆင်နွှဲစရိတ်က ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၅ ထရီလီယံ
အယ်ခိုင်ဒါအကြမ်းဖက်ခိုအောင်းနေတဲ့ တာလီဘန်အုပ်စိုးတဲ့ အာဖဂန်ကို စစ်ရေးအရပထမဆုံးတိုက်မယ်လို့ ၂၀၀၁ မှာ သမ္မတ ဂျော့ချ်ဒဗလျူဘုရှ်က ကြေညာခဲ့တယ်။ ၁၈ နှစ်အကြာမှာတော့ တာလီဘန်တွေ အားကောင်းနေဆဲဖြစ်ပြီး အာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်တွေကို တိုက်နိုင်တယ်၊ တစ်ခါတလေ တစ်ပတ်အတွင်း အာဖဂန်တပ်သားရာဂဏန်းကျအောင် တာလီဘန်က တိုက်နိုင်တယ်၊ အမေရိကန်လေကြောင်းအကူ ပါတဲ့အခါမျိုးကလွဲရင် အဓိကထိတွေ့မှုတိုင်းလိုလိုမှာ အာဖဂန်အစိုးရတပ်တွေ ရှုံးတယ်။
အယ်ခိုင်ဒါထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေက ပါကစ္စတန်ဘက်ရွှေ့သွားပေမယ့် ပင်မအုပ်စုက အာဖဂန်မှာ တည်မြဲနေတဲ့အပြင် ယီမင်၊ မြောက်အာဖရိက၊ ဆိုမာလီနဲ့ ဆီးရီးယားမှာလည်း ဌာနခွဲတွေ ထပ်ချဲ့နေသေးတယ်။
စစ်စရိတ် ၁ ထရီလီယံခွဲရဲ့ ရာခိုင်နှုန်း ၆၀ လောက်က နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာ လေ့ကျင့်ရေး၊ လောင်စာဆီ၊ သံချပ်ကာယာဉ်တွေနဲ့ လိုအပ်တဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေအတွက်ကုန်တယ်။ လေကြောင်းနဲ့ ရေကြောင်းလို သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးက ၈ ရာခိုင်နှုန်းလောက် အဲဒါကတင် တစ်နှစ်ကို ၄ ဘီလျံလောက်။
မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးက ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလျံ
အာဖဂန်ဆိုင်ရာ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်ရဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အစီရင်ခံစာအရ အာဖဂန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလို့ ကင်ပွန်းတပ်တဲ့ မူးယစ်နှိမ်နင်းရေးအားထုတ်မှုက အရေးနိမ့်သတဲ့။ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုတိုက်ဖျက်ဖို့ ဒေါ်လာ ဘီလျံချီကုန်ကျခံခဲ့ပေမယ့် အာဖဂန်ဟာ ကမ္ဘာက ပိတ်ပင်ထားတဲ့ ဘိန်းထုတ်လုပ်မှု ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ ရဲ့ပင်ရင်း။
စစ်ပွဲမတိုင်က အာဖဂန်မှာ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုကို အမြစ်ပြတ်လုနီးပါး ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ၁၉၉၆-၂၀၀၁ စာရင်းတွေက ပြတယ်။ အဲဒါ တာလီဘန်အာဏာရနေစဉ်ကာလ။ ဒီနေ့တော့ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုက ၀င်ငွေနဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေအတွက် အဓိကရင်းမြစ်ဖြစ်နေတယ်။ တာလီဘန်တွေအတွက်ပါ ၀င်ငွေရလမ်း။ အဲဒီငွေတွေကို တခြားကိစ္စထက် စစ်အတွက်သုံးစွဲနေပြီး ဒါက အာဖဂန်မှာ အကြီးဆုံးစီးပွားရေး ဖြစ်နေတယ်။
အာဖဂန်စစ်တပ်နဲ့ ရဲတွေ လေ့ကျင့်ရေးအတွက် ဒေါ်လာ ၈၇ ဘီလျံ
အမေရိကန်တွေအားထုတ်ခဲ့တဲ့ အဓိကရည်မှန်းချက်တွေထဲကတစ်ခုကတော့ ထောင်ချီတဲ့အာဖဂန်တပ်သားတွေကို လေ့ကျင့်ပေးတာ။ အမေရိကန်ရဲ့ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးရန်ပုံငွေအများစုက အာဖဂန်စစ်တပ်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့အတွက် လက်နက်ကိရိယာ၊ လေ့ကျင့်ရေးနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအတွက် အကုန်အကျခံခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် အာဖဂန်စစ်ဘက်ဟာ သူ့ဘာသာရပ်တည်နိုင်မယ်လို့ အာဖဂန်က အမေရိကန်စစ်ဘက်ကော၊ သမ္မတအာရှရက်ဖ်ဂါနီရဲ့ ထိပ်တန်းအကြံပေးတွေကော ဘယ်သူကမှ မယုံကြဘူး။ အဓိကအားဖြင့် အာဖဂန်စစ်တပ်ဟာ ထိခိုက်ကျဆုံးမှုနှုန်းကော တပ်ပြေးနှုန်းပါ မြင့်တက်နေတယ်။ နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်း စစ်တပ်တစ်ခုလုံးရဲ့ အနည်းဆုံး သုံးပုံတစ်ပုံလောက်အတွက် တပ်သားသစ်လေ့ကျင့်ဖြည့်တင်းပေးဖို့ လိုအပ်နေတယ်။
သမ္မတ အိုဘားမားလက်ထက်က ၂၀၁၄ မှာ လုံခြံုရေးကို အာဖဂန်တပ်တွေကပဲ အပြည့်အဝတာဝန်ယူဖို့နဲ့ ၂၀၁၆ မှာ အမေရိကန်တပ်အားလုံးရုပ်သိမ်းဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲခဲ့ဖူးတယ်။ တာလီဘန်တွေ အလျင်အမြန် အသာစီးရလာပြီး မြေနေရာတွေ သိမ်းမိတာကြောင့် ဒီအစီအစဉ် ပျက်ပြားခဲ့ရတယ်။
အမေရိကန်တပ်ပတ်သက်မှုအရှိန်လျှော့ချဖို့ အမေရိကန်စစ်ဘက်က အိုဘားမားကို ပထမနားချနိုင်ခဲ့၊ နောက် ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုကော။ အခုလမှာတော့ အာဖဂန်မှာ ကျန်နေတဲ့အမေရိကန်တပ်အင်အားက ၁၄၀၀၀ သာ။
အာဖဂန်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့က ဒေါ်လာ ၂၄ ဘီလျံ
၂၀၀၇ ကစပြီး အာဖဂန်စီးပွားရေးအရွယ်အစားထက် စစ်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အသုံးစရိတ်က အကြမ်းဖျင်းနှစ်ဆရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါက စီးပွားရေးအားကောင်းမောင်းသန်ရှိတယ်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်။ အာဖဂန်လူမျိုးလေးပုံတစ်ပုံကျော်ဟာ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေကြပြီး နိုင်ငံတကာ တပ်ဖွဲ့တွေ စတင်ဆုတ်ခွာခဲ့ ၂၀၁၅ ကစပြီး နိုင်ငံစီးပွားရေးက တရွတ်ဆွဲနေ။
အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန်တို့ထက် လုပ်ခသက်သာပေမယ့် နိုင်ငံတကာပွင့်လင်းမြင်သာမှုအုပ်စုအဆိုအရ အာဖဂန်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဆိုးဆုံး အကျင့်ပျက်ခြစားနေတဲ့နိုင်ငံတွေထဲ ပါ၀င်တာကြောင့် ပြည်ပရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေ နှေးကွေးနေတုန်း။
သတ္တုကဏ္ဍမှာတော့ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိလို့ ဒေါ်လာ ၁ ထရီလီယံလောက်တန်ဘိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းအဖြစ် တရှိန်ထိုးတိုးတက်နေတယ်လို့ ပင်တဂွန်က ကြွားဝါခဲ့တယ်။ တရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ချို့ သတ္တုကဏ္ဍမှာ စတင်ရင်းနှီးမြှပ်နှံနေတယ်၊ ဒါပေမယ့် ညံ့ဖျင်းတဲ့ လုံခြံုရေးနဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေက သိသာတဲ့ တိုးတက်မှုများများစားစားရဖို့ ဟန့်တားထားသလို ဖြစ်နေတယ်။
ဒေါ်လာ ဘီလျံ ၃၀ တန် တခြားပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွေ
ငြိမ်းချမ်းမှုထိန်းသိမ်းရေး၊ ဒုက္ခသည်ထောက်ပံ့ရေးနဲ့ နာတာရှည်ရေလွှမ်းမိုးမှု၊ တောင်ပြိုကျမှုနဲ့ ငလျင်ဘေးတွေအပါအဝငက် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအားထုတ်မှုတွေအတွက် အမေရိကန်အခွန်ထမ်းတွေက ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်။
ညံ့ဖျင်းတဲ့စိတ်ကူး ဒါမှာမဟုတ် ဆီးသီးဗန်းမှောက် ခြစားမှုတွေကြောင့် အဲဒီငွေအများစု လေလွင့်ခဲ့ရတယ်လို့ စုံစမ်းရေးမှူးချုပ်ကပြောတယ်။ ဆေးကုမပေးတဲ့ ဆေးရုံ၊ ကျောင်းသားမရှိတဲ့ကျောင်း၊ အသုံးမတဲ့တဲ့စစ်စခန်းတွေ နောက်တော့လည်းပျက်စီးသွား။ ဒီလိုနဲ့ ၂၀၀၈ ကနေ ၂၀၁၇ တလျှောက် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကနေ လေလွင့်တာ ဒေါ်လာ ၁၅ ဘီလျံခွဲရှိတယ်လို့ အထောက်အထားရှိ။
အမေရိကန်အကုန်ခံလို့ အာဖဂန်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပညာရေးမှာ တိုးတက်လာတာမြင်နိုင်ပေမယ့် နိုင်ငံတကာစံနဲ့ဆိုရင်တော့ မစို့မပို့သာ။ အာဖဂန်မိခင်အသေအပျောက်နှုန်းဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမြင့်ဆုံးထဲ ပါ၀င်နေဆဲ၊ မျှော်မှန်းနိုင်တဲ့သက်တမ်းကလည်း အတိုဆုံး။ မိန်းကလေးအများစု ကျောင်းခဏပဲနေနိုင် ဒါမှမဟုတ် လုံးဝမနေရ၊ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ ပညာရေးကလည်း ယျေဘူယျအားဖြင့် ညံ့ဖျင်း။
အတိုးပေးရဦးမယ့် ဒေါ်လာ ဘီလျံ ၅၀၀
စရိတ်တွေအတွက် အမေရိကန်က ငွေအကြီးအကျယ်အချေးပြခဲ့ရပြီး ဒီချေးငွေအတွက် ၂၀၂၃ အထိ ပေးရမယ့်အတိုးက ဒေါ်လာ ဘီလျံ ၆၀၀ ကျော်လိမ့်မယ်။ ကျန်ချေးငွေတွေပြန်ပေးဖို့ နှစ်အများကြီးကြာဦးမယ်။
၉/၁၁ စစ်ပွဲမှာ တိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ပြန်တွေအတွက်၂၀၅၉ အထိ ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၄ ထရီလီယံ ကုန်ဦးမယ်
အီရတ်နဲ့ အာဖဂန်စစ်ပွဲနှစ်ခုပေါင်းက စစ်ပြန်တွေအတွက် ဆေးကုစရိတ်နဲ့ မသန်မစွမ်းစောင့်ရှောက်မှုစရိတ် ဒေါ်လာ ဘီလျံ ၃၅၀ ကျော် ကုန်ပြီးပြီ။ အဲဒီထဲက တစ်ဝက်ကျော်က အာဖဂန်နဲ့ဆိုင်တယ်လို့ ဆိုတယ်။
အားလုံးစုစုပေါင်း ဘယ်လောက်လဲ မသိနိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် ကျွမ်းကျင်သူတွေတွက်ကြည့်တာက ဒဏ်ရာရစစ်ပြန်နဲ့ မသန်မစွမ်းတွေလို အကူအညီလိုတဲ့ကိစ္စတွေအတွက် နောက်နှစ် ၄၀ အတွင်း နောက်ထပ် ဒေါ်လာထရီလီယံချီ ကုန်ကျဦးမယ်လို့ ဆိုပြန်ပါသတဲ့။
(နယူးယောက်တိုင်းမ်မှ ဆာရာ အဲလ်မူခ်တာနှင့် ရော့ဒ် နော့ဒ်လန်တို့၏ဆောင်းပါးကို ဆီလျော်အောင်ပြန်ဆိုသည်)
ICJ တရားရုံးသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တင်ပြချက်အပြည့်အစုံ